DAAWO: Itoobiya Dagaalo culus oo dib u bilowday, Abiy oo waqti cusub & TPLF Oo qeylo Dhaamisay! – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Itoobiya Dagaalo culus oo dib u bilowday, Abiy oo waqti cusub & TPLF Oo qeylo Dhaamisay!
October 9, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 4
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Maalmo ka hor ayaa loo caleemasaaray raysalwasaaraha Itoobiya ee 5-ta sano ee soo socota. Abiy Axmed waxa uu xilka dib ui qabtay xilli ay Itoobiya wajahayso colaado ka huraya gudaha dalkeeda iyo cadaadisyo caalami ah.
Bal se markan Abiy waxa uu u muuqdaa mid casharro badan ka bartay imtixaanaddii badnaa ee soo maray saddexdii sano ee uu fadhiyay aqalka looga taliyo Itoobiya ee Arat Kiilo.
Durbadiiba, waxa uu bilaabay in uu weerarro hor leh oo loo adeegsanayo diyaaradaha dagaalka uu ku qaado kooxda TPLF oo laf-dhuun-gashay ku noqotay isbeddelkiisa siyaasadeed ee saddex sano jirsaday.
HALKAAN KA DAAWO WARBIXINTA
Wararka laga helayo qaybo ka mid ah deegaanka Amxaaradu waxa ay sheegayaan in Jimcihii iyo Khamiistii todobaadkan ay ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaadka taabacsan ay weerar ku qaadeen TPLF, sida hay’adaha gargaarku ay u sheegeen AFP.
Getachew Reda, afhayeenka kooxdaasi ayaa xaqiijiyay in duullaan xoog badan lagu soo qaaday ciidamadooda ku suag jiidda hore ee dagaalka.
Getachew waxa uu hadalkiisa raaciyay in weerarka loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahyn iyo hubka artillery-ga, waxaana jira isbahaysi xoog badan oo gaadhay tobannaan kun oo ka imanaya dhinac waqooyi ee gobollada Gondar iyo Wollo ee deegaanka Amxaarada.
Getachew waxa uu u sheegay Ruetors in diyaaradahu ay duqaymo ka gaysteen saddex magaalo oo ku yaalla jidka isku xidha Canfarta iyo Amxaarada.
“Waxa aan nahay kuwo isku kalsoon oo wajihi kara duullaan kasta oo nagaga yimaadda jiho walba,” ayaa uu yidhi Getachew Reda, afhayeenka TPLF.
Ciidamada Itoobiya ayaa isaga soo baxay deegaanka Tigraay markii ay dawladdu ku dhawaaqday xabbad-joojin. Xabbad-joojinta waxa lagu sababeeyay in gargaar la gaadhsiinayo dadka dagaallada ku waxyeelloobay iyo in la gaadhay xilli roobaadkii ay beeralaydu ka faa’iidaysan lahaayeen.
Maddaama hadda ay sii dhammaanayaan roobabka ka da’aya waqooyiga Itoobiya, waxa mar kale la filan karaa dagaal hor leh oo halkaasi ka qarxa.
Cadaadis xoog leh ayaa uu Abiy kala kulmayaa waddamada reer Galbeedka sida Maraykan iyo Midowga Yurub kuwaasi oo loo arkayo in ay si cad uga soo horjeedaan nidaamkiisa maamul. Dadka falanqeeya siyaasadda Itoobiya waxa ay sheegayaan in Abiy uu u jihaysan doono waddama Bariga sida Shiinaha iyo Ruushka
Xaar iyo qaad baa maskaxdiina ka buuxdo. Ethiopian Kenyan iyo darawalka isaaq can’t do shit. Ciyaal aanan 10 ordi Karin burco masoo dhafayaan.
We don’t understand Irir Samaale
Isaaq waa beel yar oo ka tirsan Dir wax irir ugu jiraana
Ma jiraan, Isaaq irir maaha mana sheegan karo Isaaq waxaa
Dhalay bucuurbacayr marna carab iyo sheikh isaaaq bay
Sheegtaan marka sheegato nama sheegan karto Isaaq
Waqti yar baa I hadhay